Terra (LUNA): Currency Crash Kuseri Kwekutanga Nharembozha Play-to-Earn Game - Gamepoint - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
TerraUSD yakadonha zvinoshamisa. Kunyangwe kudziya kwekupisa kwezhizha, pari zvino pane nguva yechando pamusika wecryptocurrency: mari dzakakosha dzakapa pachena, chikamu cheDeFi chakarohwa - uye mari inonzi yakagadzikana yeTerra network Luna (LUNA) sezviri pachena yakaita chikamu chikuru mune izvi. . Mari yacho inogonawo kuzivikanwa kune avo vatambi vanobata neMetaverse.
Vatambi vanobata zvakanyanya neMetaverse vanogona kunge vakanzwa nezveTerra network uye "LUNA" kana iyo yakagadzikana mari TerraUSD. Mushure mezvose, iyo mobile game RoboHero yakagadzira nharaunda umo midziyo inogona kuwanikwa kuburikidza nekutamba-ku-kuwana pfungwa yakavakirwa paTerra blockchain. Cryptocurrencies uye indasitiri yemitambo yagara yawana mapoinzi ekusangana.
RoboHero: Mech Kurwa paTerra Blockchain
RoboHero yaive yekutanga mbozha nhare ine nzira yekutamba-yekuwana. Saka mafeni anofanira kupihwa mubairo nekutamba, uye hongu iwe unogona zvakare kuunganidza kana kutengesa NFT (asiri-fungible tokens). Zvipikirwa zvakanzwika zvakanaka: zvese zvaidiwa kuti utange yaive smartphone, iyo RoboHero app, uye imwe LUNA mari. Nekudaro, zvinhu hazvisi kutaridzika zvakanaka kune yekupedzisira panguva ino, uye ndizvo chaizvo zvinogona kuita kuti mumwe kana mumwe mutambi adikitira.
Iyo cryptocurrency TerraUSD, yakatanga kugadzirwa semari yakatsiga mutengo, yadonha zvakanyanya. Uye nyanzvi dzinopomera chinhu chose nekuda kwekuparara kwemusika we crypto. Chero ani akadyara mari mu blockchain mari anoda tsinga dzakasimba mukuona mamiriro emusika. Pane njodzi yekurasikirwa, zvirinani kana iwe parizvino uchida kushandura yako chaiyo mari kuita mari chaiyo. Kuparara kweTerra kwakakwevera pasi bitcoin semari inotungamira. Dinosaur pakati pemari yakanyorwa kwenguva pfupi pazasi kukosha kwepfungwa $30.000 mark. Iyo nhanho yaive yekupedzisira yakaderera iyi muna Chikunguru 2021.
Nekudaro, TerraUSD (UST) yakawedzera zvakanyanya. Stablecoin yakadonha nepamusoro pe70 muzana mukati mevhiki - sezviri pachena zvichikonzera kutengesa-kure pamusika. Chikonzero chekupunzika kweTerra (LUNA) kurasikirwa kwembambo kudhora. Chaizvoizvo, ndizvo chaizvo zvinofanirwa kuchengetedza mari yacho yakasimba. UST ichangobva kuzvibvisa kubva padhora rekuAmerica uye nekudaro yakakwanisa kuchinjika pekutanga. Izvo hazvifanirwe kuitika, nekuti stablecoins inofanirwa kuita zvakapesana. Maitiro etekinoroji akatenderedza algorithms anovimbisa kugadzikana, zvirinani zvakajairika. Kubatanidza kudhora reUnited States kunogona kushanda nokuti TerraUSD neLUNA zvinogona kuchinjwa kune imwe nguva yekutsinhanisa mari - iyo iviri ye "kupisa" uye "minting" - mari inopisa nekugadzira. Nekudaro, iyo balancing mechanism haichashandi nguva pfupi yadarika - kukwidziridzwa kwemutengo kunoratidza izvi zvakajeka, nekuti stablecoin inoshanduka inotenderedza dhora rimwe reUS. Dzimwe nguva, zvisinei, kukosha kwaiva 30 cents, asi ikozvino inenge ichangopfuura 60. Nheyo shure kweTerra yaifanira kutengesa Bitcoin kuitira kuti ikwanise kuvhara TerraUSD - misika ye crypto yakapa nzira. Izvi zvinonyanya kuda kuziva nekuti Terra network ichangobva kuisa mari muBitcoin pamwero mukuru. Denderedzwa rakashata rave kutendeuka, nekuti mukuwedzera kune kwakachena kutengeserana kufunga, zviitiko zvinodaidzwawo kuti zviremera zvinodzora kuita.
Avhareji yemutambo anogona kunge asina kuita zvishoma nazvo, asi chero munhu akapinda muRoboHero uye nekudaro akawana pekutangira neLUNA angadai akagadzira kuravira kwekutengesa kwekrispto.
Kurumidza Kutungamira Bitcoin: Maitiro ekuita mari... * 27,99 EUR tenga
Kare Terraforming Mars: Dhijitari bhodhi mutambo wakawedzera kuti ubatanidze Hellas & Elysium
Inotevera Soulstice: Chiito-Game ichaburitswa kune consoles uye PC mukuvhuvhuta